Sika | Nea Bible ka wɔ ho
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Enti bɔne nyinaa nhini ne sika?
‘Sikanibere yɛ bɔne nyinaa nhini.’—1 Timoteo 6:10.
Bɔne nyinaa nhini ne sika.
Ɛnyɛ sika na ɛde “bɔne” ba; “sikanibere” mmom na ɛyɛ bɔne. Wohwɛ Bible mu a, Ɔhene Solomon a na ɔyɛ sikani no kyerɛɛ nneɛma mmiɛnsa a etumi pira nnipa a wɔn ani bere sika. Adwennwene: “Ɔdefo adedodow mma ontumi nna.” (Ɔsɛnkafo 5:12) Nea ɔwɔ biara nso no: “Nea ɔpɛ dwetɛ no, dwetɛ mmee no, na nea ɔpɛ adedodow nso, ahonyade mmee no.” (Ɔsɛnkafo 5:10) Anhwɛ a na wabu mmara so: “Nea ɔpɛ ntɛm anya ne ho no remfa ne ho nni.”—Mmebusɛm 28:20.
Dɛn na sika yɛ ma yɛn?
‘Sika bɔ onipa ho ban.’—Ɔsɛnkafo 7:12.
Sika bɔ wo ho ban na ɛma w’ani gye.
Asɛm a nkurɔfo ka sɛ sika ma nipa ani gye na ɛbɔ ne ho ban no nyinaa yɛ “ahonyade nnaadaa.” (Marko 4:19) Nanso “sika na wɔde yɛ biribiara.” (Ɔsɛnkafo 10:19) Ebi ne sɛ, wubetumi de sika atotɔ nneɛma a ehia te sɛ aduane ne aduro.—2 Tesalonikafo 3:12.
Bio nso, sika boa ma wutumi hwɛ w’abusua. Bible kyerɛ sɛ, “Sɛ obi nhwɛ n’ankasa ne nnipa, ne ne titiriw no, ne fiefo a, wapa gyidi no, na ɔyɛ onipa bɔne sen nea onnye nni mpo.”—1 Timoteo 5:8.
Dɛn na ɛbɛma woahwɛ wo sika yiye?
‘Di kan tena ase sēsē hwɛ.’—Luka 14:28.
Fa sika yɛ ade a Onyankopɔn pɛ. (Luka 16:9) Di nokware wɔ sika ho; nyɛ sika basabasa. (Hebrifo 13:18) Nea ɛbɛboa ama woayɛ wo ho awiɛmfoɔ no, ‘mma sikanibere mmma w’asetena mu.’ —Hebrifo 13:5.
Bible nkasa ntia boseabɔ, nanso ɛma yɛte ase sɛ: “Nea ogye obi hɔ bosea no yɛ akoa ma nea ɔbɔ no bosea no.” (Mmebusɛm 22:7) Ntotɔ nneɛma basabasa efisɛ, “obiara a ɔpere ne ho de, ohia na ebehia no.” (Mmebusɛm 21:5) Mmom, hwɛ wo sika ho na ‘yi biribi sie’ na wode atɔ ade a ehia wo.—1 Korintofo 16:2.
Bible tu yɛn fo sɛ, ‘yɛnkɔ so mma’ anaa yɛnkyɛ ade. (Luka 6:38) Sɛ obi yam ye a, Onyankopɔn ani gye ne ho efisɛ, “Onyankopɔn dɔ nea ɔtew n’anim ma.” (2 Korintofo 9:7) Enti “mommma mo werɛ mmfi papayɛ ne nneɛma a mo ne afoforo bɛkyɛ, efisɛ afɔrebɔ a ɛtete saa no sɔ Onyankopɔn ani.”—Hebrifo 13:16.